Izindaba - Izinja zokulala
Wonke umnikazi wesilwane ufuna ukwazi kabanzi ngezinja zabo, mayelana nenhlalo yokulala kwezintandokazi zezinja zabo. Izikhundla zezinja zilala kuzo, futhi nesikhathi abasichitha belele kungenzeka kuveze okuningi ngokuthi bazizwa kanjani.
Nazi ezinye izikhundla zokulala ezivamile nokuthi zingasho ukuthini.
Uma uvame ukubona inja yakho ilele kule ndawo yokulala. Lokhu kusho ukuthi bazizwa benethezekile futhi bevikelekile endaweni yabo. Lezo zinja zivame ukujabula, zingenandaba, futhi zithembeke kakhulu. Lesi sikhundla sishiya nezitho zabo zikhululekile ukuhamba lapho zilele, ngakho-ke ungabona ukuklabalasa nokukhahlela kwemilenze kusuka enjeni elele ngohlangothi.
Lesi simo sokulala ngokuvamile sivame kakhulu.Ezinyangeni zekwindla nasebusika lapho isimo sezulu sipholile, izinja zilele ngale ndlela, ukusiza ukugcina ukufudumala.
Izinja ezilala kulesi sikhundla, izingalo nemilenze yazo zeluliwe futhi zizibeke phansi, ngokuvamile kuyisibonakaliso sobuntu obuhle, zihlala zigcwele amandla, zilula ukukhuthaza futhi zijabule.Lesi simo sokulala sivame kakhulu emidlwane. Kuyisikhundla sokuzikhethela imidlwane elalayo ngesikhathi sokudlala futhi ifuna nje ukwehla lapho imi khona.
Ngasemuva, Ukhuphuka Emoyeni
Ukulala ngesisu esivele obala kusiza inja ukuthi izipholele njengokugoqana ebholeni kungonga ukushisa. Ukuveza lezi zindawo kuyindlela enhle yokushaya ukushisa ngoba uboya buncane nasesiswini kanti izidladla ziphethe izindlala zomjuluko.
Futhi yisikhundla esikhombisa ukuthi inja ithokomele, ishiya izindawo zabo ezibucayi kakhulu zisengozini futhi kunzima ukusheshe ume ngezinyawo.I-pup okungenzeka ukuthi ayinakho ukunakekelwa emhlabeni izokuma kulesi sikhundla. Lesi simo sokulala sivamile ezinyangeni zasehlobo.
Kulezo zinja ezikhetha ukulala nabaninizo, kuhlale kuphephe ukuhlanza, ukuhlanganisa, ukugeza nokugoma.